USophia Loren waba isakhamuzi esihloniphekile saseNaples
USophia Loren, oneminyaka engu-81 ubudala, osanda kubonakala ekukhangiseni kwephunga elisha uDolce & Gabbana, naphezu kweminyaka yobudala bakhe, uhola impilo esebenzayo yomphakathi. Ngolunye usuku umdlali wezithombe uphinde wabonakalisa ubuhle bakhe obungapheli, njengoba evele emcimbini, ngesikhathi sokumnika isihloko sezakhamuzi ezihloniphekile zaseNaples.
Ubuhle obuyinhloko baseNtaliyane babedlalwa badutshulwa eNaples futhi kaningi babona uthando lomuzi, ngakho-ke umbuso wesifundazwe sesithathu esikhulu sokuphatha sase-Italy wanquma ukunika uSophia Loren isikhundla esithile esikhethekile, okwenza abe yisakhamuzi esihloniphekile.
Idokhumende eqinisekisa lokhu, umlingisi otholwe ezandleni zameya aseNaples, uLuigi De Magistris. Isethulo salo dokhumenti sasihlala esimweni esibucayi ngaphansi kwehlombe lwabahlali bomuzi, kumsindo we ingoma yaseNeapolitan "O Sole Mio".
UTina Turner ugxile abalandeli ngokubonakala okumangalisayo
UJanice Dickinson esemusha
Njengoba kusebenza njalo
Ngaphambi kwesixuku sabalandeli, inkanyezi yefilimu yavela enkampanini kaStefano Gabbana noDomenico Dolce, abaza ukusekela imininingwana yabo. U-Lauren wayegqoke izingubo ezimnyama zokubhaliwe kwidumo elidumile labaqambi beqoqo elisha leDolce & Gabbana Alta Moda. Indwangu yayihlotshiswe ngezimbali ezibomvu, futhi isithombe sokwethenjelwa sasihlanganiswa umgexo-umdwebo, indandatho enkulu, namacici amakhulu anamaparele nezibuko ezimnyama.
UCeline Dion uzibulala ngenxa yomyeni oshonile
UKim Kardashian wanciphisa ubulili bendodana yakhe yesikhathi esizayo futhi watshela mayelana nokushiyeka komama wokubeletha
U-Alec Baldwin wanqoba isifo seLyme?
UTerrence Howard waba nguyise okwesihlanu
U-Channing Tatum noJenna Devan
U-Angelina Jolie akavumelekile eholidini elifanelwe kahle
UTro Cruise wamemezela impi emakhelwane
Yini esilindele esikhathini esisha sochungechunge oluthi "Sherlock"?
UTyra Banks wembula izimfihlo zokukhulelwa kwendodana yakhe enenyanga engu-9
UMariah Carey wagubha usuku lwakhe lokuzalwa ogwini nesoka elincane
Ayikho izidakamizwa: Izingane zikaHugh Hefner zingashiywa ngaphandle kwefa elingama-dollar amaningi
UGeorge Clooney noJulianne Moore ngesethi ye-movie ethi "Suburbicon"
Isigqoko sokugqoka sebusika
Ukuhlukaniswa kwe-plasterboard ngezandla zabo
Ukulinda kwe-Wolvesguard - inani
Izimpawu zobulili ezifihlekile
I-insider yabelane ngemininingwane yokuthi uKylie Jenner wanyamalala kuphi
Amashiya Kara Delevin
Isaladi eshibhile ngokusheshisa - iresiphi elula
Umkhosi wokubhapathizwa kwengane e-Orthodoxy - imithetho
Indlela yokudonsa i-splinter ngokuphepha futhi hhayi ebuhlungu - izindlela ezingu-10 ezilula
UHalle Berry wabonisa ukuthi ulungile ngesikhathi sokuya e-Los Angeles
I-aminocaproic acid yezingane
I-Turkey imiqulu efakwe ehhavini
Ubisi lwebele lomzimba - izimo ezibalulekile nemithetho yamama omatasa
Indlela yokulungisa umnyango we-plastic balcony?
Izambatho zokusakaza zamantombazane
I-Eduardo Avaroa National Park